Admin – Page2– JustNow Myanmar News
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ “ မတည့်တဲ့ဆေး ရှိလား” ဒီမေးခွန်းက ဆေးရုံဆေးခန်းသွားဖူးပြဖူးသူတိုင်း ကြားဖူးနေကျ မေးခွန်းမျိုး။ ‘ဘာလို့များမေးနေပါလိမ့်’ ဟု တချို့ ထင်ကောင်းထင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး တချို့က ဘာကိုဆိုလိုမှန်းပင် မသိကြပါ။ အဆိုပါမေးခွန်းတွင် ဆိုလိုရင်း အပိုင်း (၂ ) ပိုင်း ရှိပါသည်။ (၁) ယခင် ဆေးထိုးဆေးသောက်လုပ်စဥ်က အရေပြားနီရဲ၍ ရောင်ရမ်းယားယံခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ပြီး နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ရုတ်တရက်ထိုးကျခြင်း၊ သတိလစ်မေ့မြောခြင်း အစရှိသည့် ပြင်းထန်လက္ခဏာစု ဖြစ်ပေါ်ဖူးခြင်း ရှိ မရှိ။ အကယ်၍ မဖြစ်ဖူးလျှင် ယခင်က ဆေးမတည့်သည်မျိုး မကြုံဖူးကြောင်းသာ ဆရာဝန်အား ပြောပြရန်လိုသည်။ ဤတွင် ထပ်မံပြီး ဖြည့်စွက် ရှင်းပြလိုသည်က ယခင် မဖြစ်ဖူးသည်နှင့် “မိမိကတော့ ဘာဆေးနဲ့မဆို တည့်မှာပဲ … မိမိမှာ ဆေးမတည့်သည့်ကိစ္စမျိုး မဖြစ်နိုင်”ဟု ယူဆထား၍ မရပါ။ ယခင် ထိုးဖူး/သောက်ဖူးသည့် ဆေးအမျိုးအစားပင်ဖြစ်သော်လည်း ကုမ္ပဏီမတူခဲ့လျှင် ဆေးထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမတူညီမှုကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်နိုင်သည့်ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေသေးသည်။ “ဆေးကိုက မိမိနှင့်မတည့်တာလား…ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကြောင့် မတည့်တာလား “ဆိုသည်ကို မိမိအပါအဝင် မည်သူမျှ အလွယ်တကူ အတိအကျ မသိနိုင်ပါ။ လူနာ မည်သည့်ဆေးနှင့် မတည့်မှန်းကို…
Facial Toner သုံးသင့် မသုံးသင့်
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ မေလေးတို့ရေ…. အခုခေတ်မယ် များပြားလှတဲ့ skincare products တွေကြား ဘာကို ဘယ်လို သုံးရမှန်းမသိတဲ့ မေလေး တွေရှိကြလား။ အခု နှင်းပြောပြပေးမှာက မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့အခါ ဂွမ်းလေးနဲ့ မျက်နှာ အနှံ့ သုတ်လိမ်းပေးရတဲ့ facial toner လေး အကြောင်းပါပဲ။ ဒီ အဆင့်လေး ကို နှစ်ခြိုက်စွာသုံးစွဲနေကြတဲ့ မေလေးတွေရှိသလို မလိုဘူး ထင်ကြတဲ့ မေလေးတွေလည်း ရှိမှာပါ။ သုံးသင့် မသုံးသင့်ဆိုတာလည်း ကမ္ဘာ့အရေပြားဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေအကြား အငြင်းပွားနေကြဆဲပါ။ မေလေးတချို့က Toner ကို မသုံးလည်းရတယ်ဆိုပြီး မသုံးတတ်ကြပါဘူး။ Essence မှာ Toner effect ပါ ပါပြီးသားဆိုပြီး တစ်မျိုးတည်းပဲ သုံးတဲ့ မေလေးတွေလည်းတွေ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်က Essence ဆိုတာဟာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့အဆင့်ပဲမို့ Toner သုံးပေးတာနဲ့တော့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာလို့ သုံးသင့်တယ် ယူဆ လဲ…. ဘာလို့ မသုံး သင့်ဘူး ယူဆလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ကလေးတွေ ကို နှင်းသိသလောက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ Facial toner သုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို တစ်ချက်ချင်းစီ…
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ ဆိုကြပါစို့ဗျာ…. ခင်ဗျား ဖျားနေတာ ၃ ရက်ရှိပြီ။ အလုပ်ကလည်းမလုပ်နိုင်တော့ ဝင်ငွေထိခိုက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အလုပ် မြန်မြန်ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ ရောဂါလည်း မြန်မြန်ပျောက်ချင်တယ်…ဒါပေမဲ့ ဆေးခန်းပြရင် ငွေကုန်ကြေးကျများမှာလည်း ကြောက်တယ်ပေါ့။ သည်လိုအချိန်မျိုးမှာ ခင်ဗျားမျက်လုံးထဲ မြင်လာမှာက ၁၅၀၀ လောက်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်မယ့် လမ်းထိပ်က စပ်ဆေးအရောင်းဆိုင်ပဲဆိုတာ ကျွန်တော် လောင်းရဲပါတယ်။ ဆေး ၃ ခွက်ကိုမှ ၁၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀ လောက်ပဲရှိတဲ့ ရောင်စုံစပ်ဆေးလှလှလေးတွေက ခင်ဗျားရဲ့ အားကိုးရာ ဖြစ်နေတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ဗျာ…. ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲကနေတဆင့် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားမယ့် သည်ဆေးတွေဟာ ဘာဆေးတွေလဲ… ဘယ်လိုအာနိသင်ရှိလဲ…. တကယ်ရော ၁၅၀၀ နဲ့ ကိစ္စပြီးပါ့မလား ဆိုတာကို ခင်ဗျား နည်းနည်းမှ စိတ်မဝင်စားဘူးလား။ စပ်ဆေးရောင်းတဲ့သူ အများစုက သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေ တကယ်တမ်း ဘယ်လိုအာနိသင်တွေရှိပြီး ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေထိပေးနိုင်တယ်၊ ဘယ်ရောဂါရှိတဲ့လူဆို ပေးသင့်တယ် မပေးသင့်ဘူး ဆိုတာမျိုးကို မသိကြဘူးဗျ။ “ဒါဖြစ် ဒါပေး” စနစ်နဲ့ ဆေးရောင်းကြတာ။ “ ကိုဟိုဒင်းတစ်ယောက်တော့ဖြင့် ဟိုရောဂါဖြစ်နေတာ ဟိုဆေးသောက်လိုက်တာ ပျောက်သွားပြီတဲ့ဟေ့” ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးစောင့်နားထောင်ပြီး “ အဲ့ဒီ ဟိုဆေးကိုတော့ဖြင့် ငါ့ဆိုင်မှာ ဝယ်တင်ထားလိုက်ဦးမယ်” ဆိုတဲ့လူတွေက…
လေဖြတ်တဲ့ အခါ အဓိက ကုသမှုတွေက ဘာတွေလဲ
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ ရှေ့မှာရေးခဲ့တဲ့ “လေဖြတ်တယ်ဆိုတာ” ဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖူးထားရင် အခုဆောင်းပါးကို ဖတ်တဲ့ အခါ ပိုပြီး သဘောပေါက်လွယ်ပါလိမ့်မယ်။ CVA ( cardiovascular accident ) ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်း ခေါ် လေဖြတ်ခြင်းကို ကုသဖို့ရာမှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်တာလား၊ ပေါက်တာလား ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရင်းခံ နှစ်မျိုး ကုသနည်း မတူကြလို့ပါ။ လူတစ်ယောက် လေဖြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ ၁နာရီအတွင်း ဦးနှောက်ကို ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး သွေးကြောပိတ်တာလား ပေါက်တာလား ခွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ လေဖြတ်ရင် တခြား ဘာမှလုပ်မနေဘဲ ဆေးရုံကြီးကိုသာ အချိန်မီအောင် အမြန်ပြေးဖို့ တိုက်တွန်းကြတာပါ။ ဒါဆို ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုခွဲလဲ ဆိုပြီးမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့ နေရာမှာဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ရဲ့ အဆိုးဘက်ကိုရွေ့တဲ့ အချိန် အနှေးအမြန်ကို ကြည့်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ လူနာရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်လိုတော့ ရာနှုန်းပြည့်မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ရင် ပိတ်ပြီးပြတ်တာလား၊ ပေါက်ပြီးပြတ်တာလားဆိုတာ မျက်မြင်နဲ့ ခွဲခြားရတာ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ ခြေလက်မလှုပ်နိုင် စကားပြော ဗလုံးဗထွေးဖြစ်ပြီး နာရီပိုင်းလောက်နဲ့ ပြန်ကောင်းသွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ လေဖြန်းတဲ့…
တစ္နိုင္ငံလံုးက ပရိသတ္ေတြအားလံုးကို အားက်သြားေစတဲ့ ေနဝင္းရဲ႕ Proposal လက္စြပ္ေလး
Snare အဖြဲ႔မွ အဆိုေတာ္ေနဝင္းက ေအာင္ျမင္တဲ့ လူငယ္ႀကိဳက္အဆိုေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေနဝင္းရဲ႕ သီခ်င္းေတြကိုသာမက ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ေအးခ်မ္းလြန္းတဲ့ သူ႔ရဲ႕ အခ်စ္ေရးေလးကိုလည္း အားက်ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနဝင္းရဲ႕ ခ်စ္သူကေတာ့ ခရီးသြားဘေလာ့ဂါမေလး Travel Kueen @ အိမ့္ခ်စ္ေခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေနဝင္းက New Year Countdown 2020 ပြဲမွာ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္မေလးကို စင္ေပၚမွာ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနဝင္းရဲ႕ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ အခိုက္အတန္႔ေလးက ပြဲၾကည့္သူ ေလးသိန္းေက်ာ္အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ပရိသတ္ေတြကို အားက်ႏွစ္ၿခိဳက္ေစခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနဝင္းက ေကာင္မေလးကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ လက္ထပ္လက္စြပ္ေလးက အသည္းပံုေပၚမွာ စိန္ (၅) လံုးနဲ႔ စီျခယ္ထားၿပီး လက္စြပ္ေလးရဲ နာမည္ကေတာ့ “သူမႏွင့္အိပ္မက္” လို႔ အမည္ရပါတယ္။ သူမဘဝအေၾကာင္း ေသခ်ာမသိပဲ ေဝဖန္သူေတြကို တံု႔ျပန္လိုက္တဲ့ အက္စတာေဒါ့ခ်င္းဆုန္ ေနဝင္းက ခရစ္စမတ္ေန႔မွာ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ Anniversary ေလးကို က်င္းပခဲ့ၿပီး New Year ညေလးမွာ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းဖို႔ အကြက္က်က်စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေနဝင္းနဲ႔ အိမ့္ခ်စ္ေခ်ာတို႔စံုတြဲေလးအတြက္ ဝမ္းသာစကားေလးေတြ…
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်း (Self Care) လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တာရယ်၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တာရယ်ဆိုပြီး အလွယ်တကူ ခွဲခြားလိုက်နိုင်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုပဲ အဓိက အလေးထား ဂရုစိုက်တတ်ကြပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးကိုတော့ စနစ်တကျဂရုစိုက်ပေးဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော် စိတ်ထောင်းရင် ကိုယ်ကြေတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီစာလေးကနေပြီးတော့ မိမိ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုမျိုး အလွယ်တကူ ဂရုစိုက်လို့ရလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတိုင်း တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ ကြုံရတာကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတဲ့ stress ပါပဲ။ stress ပိပြီဆိုတာနဲ့ အာရုံစူးစိုက်လို့မရတာ၊ အလွယ်တကူ မေ့တတ်တာ၊ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တာ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ အသားအရေ အိုမင်းရင့်ရော်လာတာ၊ ဝက်ခြံတွေထွက်တာ၊ ဘယ်လောက်ပဲ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီး ဝိတ်ချနေပါစေ ဝိတ်တက်လာတာ ညအိပ်မပျော်တာ၊ အစာ အလွယ်တကူ မကြေတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ မောပန်းနွမ်းလျနေတာ၊ လိင်စိတ်ဆန္ဒ နည်းနေတာ… စတာတွေ ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကိုသာ လျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုရင် အချိန် နဲ့ ငွေကိုလည်း ချွေတာနိုင်မယ်၊ ကျန်းမာရေးလည်း ပိုကောင်းလာမယ်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်း ပိုအဆင်ပြေလာမယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သူများအပေါ် မှီခိုခြင်းမရှိ၊…
Peeling လုပ်ပြီး glow ကြမယ် (၁)
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ မေလေးတို့ရေ……. အခုတလော မိန်းကလေး အများစုကြားမှာ ရေပန်းစားလာတာတဲ့ စကားစုကတော့ glow skin ဆိုတာပါပဲ။ ဘာမိတ်ကပ်မှ မပါဘဲ မျက်နှာလေး ကြည်လင်ရှင်းသန့်နေတဲ့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်အလှမျိုးကို နှင်းတို့ မိန်းကလေးတိုင်း လိုချင်ကြတယ်နော်။ တချို့မေလေးတွေကတော့ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးလုပ်စရာ မလိုဘဲကို အသားအရေ ချောမွေ့ကြည်လင်နေကြပေမယ့် တချို့မေလေးတွေကျပြန်တော့ ဘာ skincare တွေ ဘယ်လိုသုံးသုံး ထင်သလောက်မထိရောက်ကြတာ တွေ့နေရပါရဲ့။ ဒါကြောင့်နှင်းက အသားအရေ ကောင်းချင် glow ချင်သူတွေ အတွက်ရော၊ လှပြီးသားမေလေးတွေ ပိုလှအောင် အတွက်ပါ ကျားမ မရွေး လုပ်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ အသားအရေကုထုံးလေး အကြောင်း နှင်းသိသမျှ ဝေမျှပေးမယ်နော်။ ကုထုံးလေးက peeling လို့ခေါ်ပါတယ်။ “ ခွာချတယ်” ဆိုတဲ့ သူ့နာမည်လေးအတိုင်းပဲ မျက်နှာပေါ်က death skin တွေ၊ cell အသေတွေကို ခွာချခြင်းအားဖြင့် ရှိရင်းစွဲ အမာရွတ်တွေ၊ အသားအရေ မညီတာတွေ ကို သက်သာစေပြီး cell အသစ်တွေ မွေးဖွားစေကာ အသားအရေ ပိုမို ချောမွေ့ကြည်လင်လာစေတဲ့ ကုထုံးလေးပါ။ Natural peeling လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝနည်းနဲ့…
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ မင်္ဂလာပါ Hello Sayarwon စာမျက်နှာကနေ ကြိုဆိုပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်ဆောင်းပါးမှာတော့ ကင်ဆာရောဂါတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးမှာပါ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ လုပ်ထားတဲ့ ဆေးသုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုအရ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းက တချို့သောကင်ဆာရောဂါ‌တွေကို ကာကွယ်ရာမှာ အကျိုးထူးစေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေရင်တောင်မှ ကုသရာမှာ ရလဒ် အကျိုးထူးစေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီစစ်တမ်းအရ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဆီးအိမ်၊ရင်သား၊အူမကြီး၊အစာမြိုပြွန်၊ကျောက်ကပ်၊အစာအိမ်နဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ နောက်ထပ်အနေနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ၊အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဝေဒနာသည်တွေကို ကုသရာမှာရော ရလဒ်အရပါ ကောင်းမွန်တာတွေ့ရသလို ကင်ဆာရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုနည်းစေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ။ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမလဲ သုတေသီတွေကတော့ ကင်ဆာဝေဒနာသည်တွေအနေနဲ့ အေရိုးဗစ်လိုမျိူ ပေါ့ပါးတဲ့ လေကျင့်ခန်းမျိုးကို တစ်ပတ် ၃ကြိမ် ၊ အလေးမခြင်းလို အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်ပတ် ၂ကြိမ် လုပ်ဖို့ နဲ့ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ခန့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ အကြံပြုပေးထားပါတယ် ။ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ခြင်းမှာတော့ တစ်ပတ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်း မိနစ် ၁၅၀…
(၂၀၂၀) ႏွစ္သစ္မွာ ကားအသစ္စက္စက္တစ္စီး မဲေပါက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ေလး
မိန္းကေလးေတြ သည္းသည္းလႈပ္ အားေပးခ်စ္ခင္ရတဲ့ ေအာင္ေလးဟာ ေမာ္ဒယ္ေလာကမွာေတာ့ ၿပိဳင္စံ႐ွား ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စတိုင္လ္က်ၿပီး ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလြန္းတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးဝန္းရံမႈကို ရရိွခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္ထိတိုင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ေတြကလည္း ေအာင္ေလးရဲ႕ အႏုပညာလႈပ္႐ွားမႈေတြကို စိတ္ဝင္တစား အားေပးေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ေလးက လက္ရိွမွာ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနသလို သူ႔ကို ဖိတ္ၾကားတဲ့ ပြဲအခမ္းအနားေတြကိုလည္း အခ်ိန္ေပးၿပီး တက္ေရာက္ေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရိွရပါတယ္။ ေအာင္ေလးက မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔မွာေတာ့ AYA Bank ရဲ႕ New Year ပါတီကို သႏၱာဗိုလ္၊ ေကာင္းျပည့္၊ ေအာင္မင္းခန္႔ စတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို Nrw Year Party မွာ Suzuki Swift ကားအသစ္စီးကို မဲေဖာက္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ထိုကားအသစ္ႀကီးကို ေအာင္ေလးက ကံထူးစြာနဲ႔ မဲေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဘဝအေၾကာင္း ေသခ်ာမသိပဲ ေဝဖန္သူေတြကို တံု႔ျပန္လိုက္တဲ့ အက္စတာေဒါ့ခ်င္းဆုန္ ေအာင္ေလးကေတာ့ (၂၀၂၀) ႏွစ္စမွာပဲ ကားသစ္ႀကီးတစ္စီးမဲေပါက္ၿပီး ကံေကာင္းမႈေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာပဲေနာ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေအာင္ေလးအတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူစကားေလးေတြ ေျပာခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။ Rowena Source: Aung Lay…
Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္ စိတ်ဓာတ်ကျ တယ်ဆိုတာက ပြောတော့သာဘာမှမဟုတ်သလို။ စိတ်ဓာတ်တကယ်ကျလာရင် အလုပ်ခွင်မှာရော လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာပါ အဆင်မပြေမှုတွေကတော်တော်လေးများလာပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်တော့ လူတိုင်းနီပါးခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်လား။ စိတ်ဓာတ်ကျ တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ….. စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာက စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ အကောင်းမြင်တဲ့ အတွေးထက် အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေက ပိုများနေတတ်ပြီး ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့ အနေအထားပါ။ ဝမ်းနည်းနေသလို ခံစားနေရပြီး အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကိုတောင် မလုပ်ချင်တာမျိုးပေါ့။ စိတ်ဓာတ်ကျမှုက နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ခေါ်လာတတ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရ အခြေအနေတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဘယ်သူတွေ စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်လဲ….. ကလေးကနေစလို့ လူကြီးလူငယ်မရွေး အရွယ်သုံးပါးစလုံး စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီး တွေမှာရော စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျမှုက အသက်အရွယ်နဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာလိုက်ပြီး ကွာခြားတာမျိုးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ရှိနိုင်လဲ….. စိတ်ဓာတ်ကျနေသူတစ်ယောက်မှာ အခုပြောပြမယ့်လက္ခဏာတွေထဲက အနည်းဆုံး ၂ ချက်လောက်ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။ • အမြဲလိုလိုပင်ပန်းနေမယ် • ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအားနည်းနေမယ် • အစားစားချင်စိတ်မရှိဖြစ်မယ် • အစားတွေအရမ်းစားနေမိမယ် • အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ် • အိပ်မပျော်ဖြစ်မယ် • တစ်ချိန်လုံးအိပ်နေမိမယ် • မျှော်လင့်ချက်မဲ့သလိုဖြစ်နေမယ်…